people Nepal » आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल ज्येष्ठ २५ गते बिहीबार आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल ज्येष्ठ २५ गते बिहीबार – people Nepal
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल ज्येष्ठ २५ गते बिहीबार
आज श्री शाके १९३९, वि.सं. २०७४ साल ज्येष्ठ २५ गते बिहीबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ जुन ८ तारीख, ज्येष्ठ शुक्लपक्ष चर्तुदशी तिथी १५:५९ बजे सम्म पश्चात पूर्णिमा तिथी चन्दमा बृश्चिक राशिमा सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, पूर्णिमाब्रत
खानपानको क्षेत्रमा बिशेष सावधानि अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ । मित्रजनको अधिक सामिप्यता उत्तम नरहला । पारीवारिक साथसहयोगमा कमि महसुस हुनेछ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ । सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेको छ ।
कार्यसम्पादनमा आटँ र शाहसको कमि महसुस हुनेछ । बाणीको गलत अर्थ लगाउन प्रतिपक्क्षीहरु सबल रहनेछन । मित्रजनको सामिप्यताले सामान्य यात्राको योग निमत्याउनेछ । दाम्पत्य सम्बन्ध सुधारका निम्ती सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । तात्कालिन आर्थिक अभाब देखा पर्नेछ ।
शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ । सामान्य यात्रा पश्चात भोजभतेरमा सरिक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । तपाईको कार्यको प्रतिफल अन्य ब्यक्तिहरुलाई मिल्नेछ । सामाजिक कार्यमा समय ब्यतित हुनेछ । स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
बिशिष्ट ब्यत्तिहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । परोपकारजन्य कार्यमा रुचि जाग्नेछ । बिद्यार्थी वर्गहरुको निम्ती समय मध्यम रहेको छ । सामान्य चोटपटकको सम्भाबना रहेको छ सजग रहनु उत्तम रहला । आफ्नो लगनसिलताले गर्दा नयाँ कार्यको थालनि साथै आम्दानिमा बृद्यि हुने योग रहेको छ ।
पारीवारिक कलहको सामना गर्नुपर्ला । सबारीसाधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ । जिवन साथीको सहयोगमा ब्यापार ब्यवसाय बाट मनग्य लाभ मिल्नेछ । मान्यजनहरु सगँको तात्कालिन बिछोको सम्भावना रहेको छ । मानप्रतिष्ठामा आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
दाजु भाई तथा मित्रजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । अपरीपक्क निर्णयले तपाई लाई गलत साबित गर्न सक्नेछ । सामान्य कार्य सम्पादन गर्न बढी परीश्रम र समय ब्यतित हुन सक्छ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेको छ ।
कुलकुटुम्बको साथ सहयोगमा बृद्धि हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । बाणिका क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । अध्यान अध्यापन तर्फ समय सक।रात्मक देखिदैन । मानसिक तनाबको सामना गर्नु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । प्रतिपक्षीहरु सबल रहनाले कार्यसम्पादमा झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला ।
शारीरिक आलस्यातले गर्दा गरीरहेको काम को क्षेत्रमा अप्जस सहनु पर्ला । दाम्पत्य सम्बन्ध सुधारका निम्ती सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । तात्कालिन आर्थिक अभाब देखा पर्नेछ । पारीवारिक साथसहयोगमा कमि महसुस हुनेछ । सामान्य स्थान्तरणको योग रहेको छ ।
सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । सामान्य चोटपटकको सामनागर्नु पर्न सक्छ । खानपान मा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । दाजु भाई तथा मित्रजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले कार्य सम्पादनमा सहजता भने प्राप्त हुनेछ ।
बितिय क्षेत्रको लगानिका निम्ती उत्तम समय रहेको छ । ब्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा समय मध्यम रहनेछ । गैर बिश्वसनिय कुराको पछि लाग्नाले कार्यमा झमेला उत्पन्न हुनसक्ला । बौधिक बिकाशमा जुट्ने समय रहेको छ । प्रियजन सगँको भेटघाटमा मन प्रशन्न रहनेछ ।
वाणीका प्रभाबले कार्यसम्पादनमा सहजता आउनेछ । मित्रजन सगँको सम्बन्धमा भने तिक्तता उत्पन्न हुन सक्ला । सामान्य कार्य सम्पादन गर्न बढी परीश्रम र समय ब्यतित हुन सक्छ तथापि सभासम्मेलनमा सरीक हुने अबसर जुट्नेछ । परोपकारजन्य कार्यमा रुचि जाग्नेछ ।
अन्य ब्यक्तिहरुको कार्य लापरबाहिका कारण सामान्य अपजसको सामना गर्नु पर्ला । सामान्य यात्रा पश्चात सभासमेलनमा सरिक हुने अवशर जुट्नेछ । सामान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्ने समय रहेको छ । पारीवारिक झोरझमेलाको सामना गर्नु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।